उपत्यकामा भेटिए ६३७ संक्रमित, काठमाडौँमा कति ? - सिम्रिक खबर
उपत्यकामा भेटिए ६३७ संक्रमित, काठमाडौँमा कति ?
काठमाडौँ । राजधानीका तीन जिल्लामा ६३७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार काठमाडौँ जिल्लामा ४९२ , ललितपुरमा ५० तथा भक्तपुरमा ९५ जनामा कोरोना देखिएको हो । त्यसैगरी आज देशभर ११७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार वितेको २४ घण्टामा १८९३ जना निको भई घर फिर्ता भएका छन् । त्यसैगरी यो अवधिमा ७ जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका छन् ।